Ihe nkiri ị nwere ike ilele na YouTube n'efu (yana iwu) | Nye m oge ntụrụndụ
Gabriela moran | | Cine, Ihe nkiri sinima, Cinema site n'ụdị
YouTube ka bụ otu n'ime ụzọ eji eme ihe ma na -ejikarị na -arụ ọrụ dị ka netwọkụ mmekọrịta. Ndị ọrụ n'ozuzu na -ekerịta vidiyo, yabụ enwere ike inwe ike lelee ihe nkiri zuru oke n'efu. Agbanyeghị, enwere nwebiisinka na iwu ụfọdụ na -egbochi ọdịnaya nke ibe ahụ ka ọ ghara ịdaba na mgbochi nke iwu. Oge nke a M na -ewetara ụfọdụ fim ị nwere ike ilele na YouTube n'efu na iwu na ọ nwere atụmatụ na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị bụ onye na -akwado ihe nkiri ochie, ị gaghị akwụsị ịgụ ọdịnaya m kwadebere!
Ọ bụ eziokwu na nyiwe nkwanye ugwu nwere nnukwu akụkụ ahịa n'etiti ndị ọrụ ha, YouTube na -anọchite anya nhọrọ efu yana nhọrọ adịghị na nyiwe ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịchọta ihe niile site na akwụkwọ akụkọ ruo nnukwu ihe nkiri ochie! Ana m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na -agụ ka ị chọpụta ihe kacha mma YouTube nwere n'ihe ihe nkiri mara mma nke na -edoghị n'okpuru nwebisiinka.
Nhọrọ m na -ewetara kwekọrọ na oge teknụzụ dị anya nke ukwuu site na ihe anyị maara taa: ha bụ ndị isi ojii na ndị ọcha na ụfọdụ kwekọrọ na ihe nkiri dị jụụ. Agbanyeghị lOgo akụkọ ndị a dị elu nke ukwuu na ọnụ ahịa omenala enweghị atụ. Nhọrọ ahụ na -egosi ihe nkiri dị mkpa nke ihe odide dịka Charles Chaplin, yana ihe nkiri vampire mbụ, a na -egosikwa otu n'ime ihe nkiri zombie na -asụ ụzọ, yana akụkọ ọhụụ nke ọdịnihu na akụkọ nzuzu nke metụtara ndị na -egbu ọchụ na hypnosis.
1 Ọlaedo ọsọ
2 Oti mkpu na expresso (Nwanyị ahụ lara n'iyi)
3 Nosferatu: egwu egwu
4 Obodo ukwu
5 Abalị nke Ndị Nwụrụ Anwụ Dị Ndụ
6 Onye Ọkachamara General
7 Ọchịchị Dr. Calgary
8 Enwere ihe nkiri ọzọ ị nwere ike ilele na YouTube n'ụzọ iwu kwadoro?
Emere ya na 1925 ma ọ bụ akara ngosi ihe nkiri Charles Chaplin, onye dekwara, duzie ma mepụta ihe nkiri ahụ. A na -ahụta "Golden Rush" dị ka otu n'ime ọrụ ya ama ama wee nata nhọpụta Oscar abụọ mgbe ewepụtara ụdị ụda ahụ na 1942.
Arụmụka bụ dabere na tramp na -achọ ọla edo wee kwaga Klondike dị na Canada ebe a na -eche na nnukwu ihe dị oke ọnụ ahịa dị otú ahụ dị. Mgbe ọ na -aga, oké ifufe nke na -amanye ya ịchọ ebe mgbaba n'ụlọ gbahapụrụ agbahapụ nke bụ ụlọ onye ogbu mmadụ dị ize ndụ tụrụ ya n'anya! Fate na -akpọbata onye ọbịa nke atọ n'ime ụlọ na n'ihi oke ifufe ahụ, ọ nweghị onye nwere ike ịhapụ ebe ahụ.
Ihe odide atọ ahụ na -amụta ibikọ ọnụ n'ihe ha nwere ike ịhapụ ụlọ. Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, oke ifufe ahụ kwụsịrị, onye ọ bụla na -agakwa n'ụzọ nke ebe njedebe ikpeazụ nwere otu ebumnuche: ịchọta ebe a na -egwupụta ọla edo!
N'oge ụzọ onye ihe nkiri anyị na -aga, ọ na -ezute Georgia. Nwanyị mara mma nke ọ hụrụ n'anya mana ọ mechara kewapụ. Akụkọ ahụ na -agwa anyị ọtụtụ ihe egwuregwu ndị agwa anyị ga -emerịrị tupu ha eruo ebumnuche mbụ ha. Ọ bụ ihe mere ị ga -eji mara arụmọrụ Chaplin na -enweghị atụ nke na -eji ihe ọchị pụrụ iche nke na -egosipụta ihe nkiri ojii na nke ọcha na -agba ndị na -ege ntị ume mgbe niile.
Njedebe nke akụkọ ahụ nwere obi ụtọ, ebe ọ bụ na onye na -eme ihe nkiri na -enweta ihe ọ chọrọ. Agbanyeghị, n'ikpeazụ ọ ga -achọpụta na ihe ọ rụzuru n'ezie dị mkpa karịa ọla edo ọ na -achọ.
Oti mkpu na expresso (Nwanyị ahụ lara n'iyi)
Ihe na -atọ ụtọ na kpochapụwo juputara na enyo bụ atụmatụ nke aha a na -ekwu. E wepụtara ya na nnukwu ihuenyo na 1938 na New York Times họọrọ ya ihe nkiri kacha mma n'afọ ahụ. Ọ bụ ihe nkiri Britain nke Alfred Hitchcock duziri, akụkọ a dabere na akwụkwọ akụkọ "The wheel spins." Ndị na -akwado ya bụ Margaret Lockwood, Paul Lukas, Basil Radford Redgrave na Dame May Whitty.
Nkata ahụ na -agwa anyị njem ịlaghachi n'ụlọ nke a di na nwunye di na nwunye na -alaghachi London, ụlọ ha. N'ihi ihu igwe na -adịghị mma, a na -amanye ụgbọ oloko ịkwụsị ka echedoro ndị njem; di na nwunye na -ejegharị ejegharị na -arahụ n'otu obodo dịpụrụ adịpụ. Akụkụ na -adọrọ mmasị na -amalite mgbe mgbe ha laghachiri n'ọdụ ụgbọ oloko wee chọpụta na onye njem apụla. Njem ahụ na -enweghị isi ịla n'ụlọ na -aga ịghọ nrọ ọjọọ!
Onye njem ọ bụla na -aghọ onye a na -enyo enyo. Mmepe akụkọ a na -ekpughe ihe nzuzo na -atọ ụtọ nke ihe karịrị otu n'ime ha….
Nosferatu: egwu egwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ vampire n'anya, ị ga -ahụ ya! Nosferatu bụ ihe nkiri izizi metụtara ezi akụkọ Dracula nke Bram Stoker dere. N'agbanyeghị eziokwu na enwere esemokwu na ụfọdụ okwu iwu nke onye ntụzi Friedrich Wilhelm Murnau megide ndị nketa nke akụkọ mbụ, a na -ewere ihe nkiri a dị ka mmalite nke ihe nkiri vampire kacha mma na akụkọ ihe mere eme ụdị ihe nkiri.
Otu di na nwunye na -eto eto kpakpando na akụkọ ahụ, di nke aha ya bụ E zigara Hutter na Transylvania na azụmahịa ka ọ mechie nkwekọrịta ya na Count Orlok. Ozugbo etinyere n'ime ụlọ ebe ahụ, Hutter chọpụtara akwụkwọ macabre nke na -ekwu maka vampires ma mee ka ọ nwee mmasị. Mgbe e mesịrị, ọ na -aga n'ogige ọnụ ọgụgụ ebe ọ na -ezute onye ajọ omume.
Ụbọchị mgbe ị gara na nnukwu ụlọ, Hutter na -achọpụta akara abụọ n'olu ya nke metụtara ọtịta ahụhụ. O nyeghị ihe omume ahụ nnukwu mkpa ruo mgbe ọ dọ na -achọpụta na ọ nọ n'ihu ezigbo vampire, Count Orlok!
Akara dị n'olu ya na -eme ka anyị jụọ ajụjụ a: Hutter ọ ga -enwe akpịrị ịkpọ nkụ maka ọbara nke nwunye nke ya?
Ọ bụ ihe nkiri nkịtị nke sitere na German wepụtara na 1926 na nke ahụ welitere eziokwu nke ụwa na 2026 ya bụ, mgbe otu narị afọ gachara!
Fim ahụ na -agwa anyị gbasara ihe nkiri nkewa klaasị mmekọrịta na ịkpa oke na e nwere n'etiti mmadụ abụọ ebe ndị na -arụ ọrụ na -ebi n'ime ime obodo ma amachibido ịpụ na mpụga ụwa. Ike gwụrụ nke ịkpa oke na mmegide na robot kpaliri ya, lNdị ọrụ ahụ kpebiri inupụ isi megide ndị nwere ihe ùgwù. Ha yiri egwu ibibi obodo ahụ na udo nke klaasị nwere ohere nke achọpụtara ndị amamihe na ndị nwere ikike akụ na ụba.
Anyị na -ahụ mkpụrụedemede abụọ, onye ndu sitere na klaasị ọ bụla, dị ka ndị protagonists na ndị dike. Ha na -elekọta <cmezie nkwekọrịta dabere na nkwanye ugwu na ndidi.
Ọ bụ ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu usoro a na -ewepụta maka ọdịnihu na taa adịghị anya.
Metropolis mejupụtara ihe nkiri izizi a ga -enye udi "Memory of the World" nke UNESCO nyere. Nghọta a bụ n'ihi ịdị omimi nke ekwuru okwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Abalị nke Ndị Nwụrụ Anwụ Dị Ndụ
Ọ bụ ihe nkiri egwu nke ewepụtara na 1968 na nke ahụ gbanwere ụdị nke ihe nkiri lekwasịrị anya zombie. Ụfọdụ na -ewere ya dị ka ihe nkiri kacha mma na ngalaba a n'ihi ọrụ ndị 'nwụrụ anwụ na -aga ije' rụrụ na nkata ahụ nakwa na o metụrụ ihe nkiri ndị a ga -ewepụta mgbe nke a gasị. N'ihi ihe ịga nke ọma nke isiokwu a mepụtara, ewepụtara saga nwere isi isii. E wepụtara usoro ndị a n'afọ 1978, 1985, 2005, 2007 na 2009.
Ihe nkiri mmeghe, nke dị na Youtube, bụ maka otu ndị mmadụ kewapụrụ onwe ha n'ụdị ugbo ma na -alụ ọgụ maka ndụ ha mgbe otu ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie. Akụkọ a bidoro na ụmụnne abụọ gbabara ebe ahụ na -achọpụta na ọ bụghị naanị ha na -achọ ịlanarị.
Maka oge ya, ihe nkiri ahụ kpatara ụjọ n'etiti ndị na -ege ntị n'ihi ihe nkiri na -eme ihe ike na adịghị mma nke zombies gburu.
Onye Ọkachamara General
Buster Keaton bụ onye omee ama ama site n'oge Charles Chaplin. Ọ bụ ihe nkiri na -agbachi nkịtị, nke oji na nke ọcha bụ nke ụdị ihe ọchị. Ọ bụ mmegharị nke ezigbo ihe mere n'oge Agha Obodo na United States na 1862.
Akụkọ ihe mere eme na -agwa anyị ndụ nke Johnnie Gray, onye ọkwọ ụgbọ oloko nke ụlọ ọrụ Western & Atlantic Railroad. Ya na Anabelle Lee nwere mmekọrịta ịhụnanya, onye rịọrọ ya ka ọ banye na ndị agha mgbe agha dara. Agbanyeghị, onye ndu anyị anabataghị ya n'ihi na ha na -ahụta nka ya dị ka onye nrụpụta ihe bara uru. Mgbe ọ nụrụ banyere ọjụjụ ndị agha, ANabelle hapụrụ Johnnie dị ka onye ụjọ.
Ọ na -ewe obere oge ka onye ọlụlụ mbụ ahụ zute ọzọ n'ihe omume ọjọọ nke na -etinye ndụ ha n'ihe egwu.
Ọ dị mkpa ịkọwa na anabataghị fim ahụ nke ọma n'oge izizi ya na 1926, ọ bụ ruo mgbe ọtụtụ afọ gachara ka ọ ghọrọ onye ama ama na e weere ya dị ka otu n'ime ọrụ kacha mma onye omee ahụ rụtụrụla.
Ọchịchị Dr. Calgary
Anyị na -aga n'ihu na ụdị ịgbachi nkịtị yana na oji na ọcha. Ọchịchị nke Dr. Calgary bụ ihe nkiri egwu German nke ewepụtara na 1920. Lakụkọ ya na -ekwu maka ogbugbu nke onye na -ahụ maka mmụọ nke nwere ike ịpnụbiga mmanya ókè na onye na -eji onye na -ehi ụra eme mpụ ndị ahụ!
Dọkịta Calgary bụ ọkaibe nke na -eji ohere ya na adịghị ike nke onye na -ehi ụra eme ụdị ihe ngosi na -atọ ndị obodo ụtọ. A na -akọ akụkọ ahụ azụ ma Francis, otu n'ime ndị isi akụkọ ahụ kwuru ya.
N'ozuzu, akụkọ gbara okirikiri gbara akụkọ ahụ gburugburu n'ihi eziokwu na nkata ahụ na -ekwu maka isiokwu metụtara ara na egwuregwu uche. A na -ele fim ahụ anya dị ka ihe nkiri ọrụ kachasị na ihe nkiri sinima German. Ederede maka ihe nkiri a dabere na ahụmịhe nke ndị mepụtara ya: Hans Janowitz na Carl Mayer. Ha abụọ bụ ndị na -eme udo ma gbalịa igosipụta n'ụzọ pụrụ iche ike gọọmentị na -enwe n'ahụ ndị agha.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ egwu egwu nke na -eji uche ndị na -ekiri egwu egwu ma na -eju anya n'ihi ụzọ e si ekpughere akụkọ ahụ.
Enwere ihe nkiri ọzọ ị nwere ike ilele na YouTube n'ụzọ iwu kwadoro?
N'ezie ọ dị! Utu aha m gosipụtara bụ ntakịrị ụtọ nke ọdịnaya iwu anyị nwere ike ịchọta. Oge a ka m lekwasịrị anya na fim kpochapụwo nke kpaliri mmasị dị ukwuu ka oge na -aga. Ọzọkwa, enwere akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri ndị ọzọ dị ugbu a anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya n'iwu yana n'efu.
Agaghị m achọ ịsị nke ọma n'ebughị ụzọ kwuo na enwere aghụghọ a na -apụghị ịgụta ọnụ ịchọta ọdịnaya efu na nyiwe dị ka YouTube, agbanyeghị, ka anyị cheta na ọtụtụ n'ime omume ndị a megidere iwu. Ka anyị gbaa mbọ tinye aka na ụwa ka mma na -ezere omume na -adịghị mma nke na -emebi ikike nwebisiinka nke ahụ kwesịkwara ka ọrụ gụnyere imepụta ihe nkiri.
Enwere m olileanya na ị ga -enwe mmasị na nhọrọ fim ị nwere ike ilele na YouTube n'ụzọ iwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Ihe nkiri ị nwere ike ikiri na YouTube n'efu (yana iwu)